Semalt dia manoritsoritra ny tontolon'ny fandrosoana ara-barotra E-Commerce
Nipongatra be ny tontolon'ny varotra e-varotra, hany ka mino ny rehetrafa ny fanesorana ny trano biriky sy tranombarotra mahazatra any Eoropa sy Etazonia dia tena akaiky. Na izany aza e-varotraNy fananganana dia andrasana manerana izao tontolo izao, ny e-varotra any amin'ny faritra Azia Pacific dia hiaina fitomboana miavaka.
Ny e-varotra ao amin'ny sisintany iraisam-pirenena dia hiaraka amin'ny fampisehoana an-trano miaraka17 isan-jato ny fandaniana fanitarana raha ho an'ny 12 isan-jaton'ny fanitarana ny tahan'ny fitomboana ho an'ny taona manaraka. Ny manam-pahaizana Semalt Services Services, Igor Gamanenko dia manazava ny fivelaran'ny e-varotra any amin'ny faritra samihafa - comprar seguridad.
Antony antony manitatra ny Business Online
Manamora ny fanaovana raharaham-barotra an-tserasera ny logistics an-tserasera manerantany, ka mahatonga azy io ho mora kokoa.Maro ireo fomba fandoavam-bola azo antoka izay mamela ny fifanakalozana vokatra azo antoka ihany koa. Ankoatr'izay, ny fampidirana smartphones amin'ny rehetraNy kontinenta dia manome fahafahana ny fahazoana ny serivisy amin'ny aterineto any amin'ireo firenena mandroso sy mandroso, raha toa ka lasa fitaovana ho an'ny SEO ny SEOny fitomboan'ny aterineto amin'ny orinasa.
Miaraka amin'ny toekarena mitombo avo lenta any amin'ny kaontinanta Aziatika, izay ahitana ny olonaTsy dia mahafa-po noho ny vokatra avy ao an-toerana izy ireo, ny e-commerce dia handrotsa-doko amin'ny $ 627 lavitrisa amin'ny 2022. Ny ankamaroan'ny e-commerce dia miresakamanodidina ny vokatra izay tsy namokatra teo an-toerana, koa eto China dia mandray ny anjaran'ny liona amin'ny tsena an-tserasera.
Fiantsenana sisin-tany any China
Misaotra ny SEO, hanatsara kokoa ny varotra an-tserasera amin'ity taona ity. Hitarika ny sisintany i Shinaonjam-peo an-tserasera, nahatratra 200 tapitrisa tapakila an-tserasera tamin'ny alàlan'ny 2020 tamin'ny fivarotana izany vola 245 lavitrisa izany araka ny Accenture..Miaraka amin'nyIty fifaninanana fifaninanana eo amin'ny Alibaba ao Shina sy Amazon amin'ny tsena Shinoa any Etazonia dia mampitombo ny fampiharana ireo fomba fanao amin'ny orinasan-tserasera.
Ny fitaovana nandresy dia ahitana singa toy ny fampidirana ny fandoavana ny fanomezanany vidin'ny vokatra, ny fitantanana ny fanarahan-dalàna momba ny fanarahan-dalàna, ary ny fomba fanao SEO. Raha ny fandoavam-bola dia manolotra vola be ny tranokala Sinoafomba izay azo antoka sy azo antoka. Ny takelaka tahaka an'i Alipay (Alibaba) sy Tencent (WeChat) dia namorona rafitra lehibe iray izay manaiky ny fandoavam-bolaAvy amin'izay firenena tianao.
Fiantsenana sisin-tany amin'ny faritra hafa
Araka ny fikarohana nataon'i KPMG any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrikana, AraboI Afrika dia mankasitraka ny fivarotana an-tserasera amin'ny aterineto. Ohatra, ny dikan'ny Moyen-Orient ao Amazonia - Souq- Nampitombo ny fivarotana an-tserasera tao amin'ny faritra tamin'ny zavatra mihoatra ny 8 tapitrisa tany am-piandohan'ny taona 2017.
Ny fiverenan'ny vokatra dia lafo be araka ny Federal Express Annual Americanany tatitra momba ny 2016. Ankehitriny, ny mpanjifa dia afaka mahazo fandaniana amin'ny vidin'ny fividianana hatramin'ny ampahany sasany amin'ny alàlan'ny tolotrasa PayPal.
Varin-tsolika any Amerika
Ny fandinihana, notontosaina tamin'ny orinasa fikarohana isan-karazany, dia manondro ny fivarotana sisintany any Etazoniadia eo amin'ny 36 isan-jaton'ny fandraharahana an-tserasera ao amin'ny firenena. Mihoatra ny antsasaky ny varotra amin'ny aterineto no mamakivaky ireo tsena toy ny eBayAmazon, raha mihoatra ny antsasaky ny mpivarotra sisintany mampiasa USD noho ny vola azo itokisana indrindra. Amin'ity dingana ity, ny SEO dia manana lanjany lehibeanjara amin'ny fanatsarana ny fisian'ireo mpivarotra an-tserasera.
Ny fivoaran'ny fivarotana amin'ny tsena an-tserasera dia ny dingana izay mitaky fandinihana aryfampiharana ny fomba fanao tsara indrindra raha mitandrina ny fepetra misy. Tsy mahagaga raha lasa ny tolotra mahombyalternative amin'ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana raha mampiasa SEO ny fahazoana miditra miorina amin'ny sehatra manerantany. Noho izany, raha jerena ny toerana misy eo an-toerana syNy fangatahana amin'ny alàlan'ny sisin-tany sy ny fahaiza-manao, ny fanaraha-maso manokana dia manatsara ny fandrindrana ny tsena.